Bandhigyada BTS World Tour Showga Neefsashada Nuxurka AR Content | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » BTS World Tour Show Showyo Nuxurka Nuxurka AR Content
BTS World Tour Show Showyo Nuxurka Nuxurka AR Content
- Dalxiis casriyeyn ah ayaa adeegsanaya xalalka habeynta shaqada iyo qalabka isqarxinta ee xoogga leh si loogu xoojiyo waxyaabaha ugu badan ee dalxiiska AR -
London, UK, 9 Oktoobar 2019 - Band band BTS waxay iibisay wax ka badan 15 milyan oo albums oo adduunka ah, taas oo ka dhigaysa suugaanta ugu wanaagsan South Korea ee abid. Waxay sii wadaayaan xukunkooda adduunka iyagoo taageerayaasheeda farxada leh ee adduunka ay ugu jiraan 'Jacaylka naftaada: La hadal naftaada' safarka adduunka.
Dalxiiska-20-taariikhda waa garoon lagu dheereeyay safka hore ee guushii madaxa weyneyd ee guushu ku raacday 2018 si wanaagsanna waa loo soo dhoweeyey, iyadoo taariikhihii London Wembley Stadium laga iibiyay labo daqiiqo gudahood tigidhadii la sii daayay. Waxsoosaarka hal-abuurka leh wuxuu adeegsadaa mashiinka warbaahinta '2 Media' si uu u wado nuxurka fiidiyowga, iskudhafka maaddada waxsoosaarka iyo u bixiyo waxyaabaha AR.
Shirkadda Maareynta Big Hit Entertainment, agaasimeyaasha hal abuurka leh Qorshe A iyo naqshadeeyayaasha wax soosaarka FragmentNine ayaa uraystay dalxiis ahaan inay tahay xaflad weyn oo heeso kasta oo ku saabsan liiska loo diyaariyey inay la xiriiraan taageerayaasha, wadajirka loo yaqaan ARMY. Bandhigyada waxaa ka mid ah bur-bur, biyo-qulqulaya, budo qoryo iyo rashyo iyo sidoo kale ka qeyb-galka dhagaystayaasha oo ay ku jiraan ulaha gacanta ARMY BOMB. Gabayga "Xarago: Jacayl" niyadda dahsoon ayaa loo abuuray iyadoo la adeegsanayo tooska loo yaqaan 'AR', oo ah kii ugu horreeyay ee riwaayadaha tooska ah.
LIVE-LAB Co., Ltd (Laydhka iftiinka iyo Muuqaalka Muujinta Muuqaalka) ayaa ku taliyay in la adeegsado jahawareerka socdaalka "sababta oo ah dabacsanaantiisa iyo xasilloonida lagula tacaali karo isbeddelada isbeddelaya muddada safarka dheer," ayuu yiri Maamulaha Guud Alvin Chu. LIVE-LAB waa iskaashatada istiraatiijiyadeed ee iska caadi ah oo fadhigiisu yahay Seoul.
Ku dhashay wada hadallada u dhexeeya Big Hit, Qorshaha A, iyo FragmentNine waxay timid fikradda ah in loo adeegsado Xaqiiqda dhabta ah ee Soojireenka: Jacaylka. Kooxda waxay lahaayeen xoogaa fiidiyowyo tixraac ah oo ku saabsan boodbood ka bood ah, laakiin AR si uun uma helin waddoheeda madadaalada.
Waxaa laga shaqeeyay in loo rogo fikradahaan napkin-ka ah mid dhab ah, FragmentNine, oo ka kooban naqshadeeyayaasha guud Jeremy Lechterman iyo Jackson Gallagher, waxay la wadaageen saaxiibbadoodii muddada fog iyo asxaabtooda All All (AOIN) si ay u bilaabaan sahaminta fursadaha.
Toddobaadyada soo socda, dhowr fikradood ayaa ka dhex dhacay qof kasta illaa ugu dambeyntii ay isku dheceen qaabka iyo horumarka gabayga. Waxyaabaha AR ka kooban ugu dambeynti waxay ka koobnaayeen ereyo, qaabab, iyo qalbi qalbi uu farshaxanku la falgali karo.
Tababbarka wax soo saarka, AOIN waxay dhistay qaab muunad nus ah oo masraxa ah si ay u tijaabiso kamaradaha AR iyo dhaqdhaqaaqa socodka maadaama tani aysan ahayn fikrad kaliya oo ka imaan karta shelf, waxay u baahan tahay in la shaqeeyo. Tani waxay sidoo kale u oggolaatay FragmentNine, Plan A, iyo AOIN inay dib-u-eegis ku sameeyaan waxa ku jira waxyaabaha ka horreeya dib-u-tababbarashada goobta.
AOIN waxaa loo xilsaaray inay ku dhex daraan AR socdaalka lagu cabiro garoonkooda iyagoo adeegsanaya kaamirooyinka hadda jira iyo nidaamka fiidiyowga, oo aan muuqaal yar ahayn. Dalxiiska ayaa la rumeysan yahay inuu yahay kii ugu horreeyay ee loo adeegsado 'AR' oo loogu talagalay dalxiiska garoonnada badan ee dunidu ku badan tahay.
Kevin Zhu, oo ka mid ah Naqshadeeyayaasha Astaamaha A ee 'AOIN', ayaa sharxaya "Waxaan abuurnay inaan ka caawino fanaaniinta, maareynta iyo soosaarka inay fahmaan waxa ay ka kooban tahay AR. Tani waxay ku lug yeelatay dood badan iyo waxbarashada macmiilka ee ku saabsan doorsoomayaasha saameeya wax soo saarka dhamaadka: iftiinka, cabirka / cabirka, midabka, sameynta saxanka hore iyo waxyaabo kaloo badan. Doodda noocan ahi waxay lama huraan u ahayd waayo teknolojiyadda iyo hirgelinta sawir-gacmeedyada AR aad bay ugu cusbooneysiisay daneeyayaasha waaweyn. Ugu dambeyntiina, waxay ahayd khibrad waxbarasho oo wanaagsan dhammaanteed, waxaanan ku qaadan doonaa qaar ka mid ah casharadaas sidii aan horay ugu socon lahayn mashaariicda. ”
Dhanka farsamada, AOIN waxay ahayd inay ka gudubto aqoonsi la’aanta la xiriirta is dhexgalka qulqulka shaqada AR, ayay qortay soo saaraha iyo naqshadeeyaha astaamaha AR, Berto Mora. "Waxaan ku sameynay baaritaano badan gudaha istuudiyahayaga halkaas oo wax walbaa ay ku shaqeeyaan jawi la xakameynayo, laakiin markaad goobta joogto waa inaad wax ka qabataa arrimaha adduunka ka jira. Maaddaama inbadan oo tikniyoolajiyadani tahay wax cusub, waa inaan wax ka qabannaa arrimo badan oo aan la garaneyn iyo astaamo aan qornayn. La shaqeynta wada-hawlgalayaashayada, sida isbadbadelka, waxay noo oggolaaneysaa inaan gaarno waxaan u baahanahay si aan uga dhigno qulqulka hawlahan inuu ka shaqeeyo adduunka dhabta ah. ”
Sida uu sheegayo Soo-saareha Guud ee AOIN Danny Firpo, “Fahamka waxqabadka baaxadda garoonka wuxuu ahaa cunsur muhiim ah. Qiyaasta heerka garoonku wuxuu macnaheedu yahay in jilaayuhu aad ugu yaraa in la arko shakhsiyan marka laga reebo kuwa safka hore. Boqolkiiba muhiim ah dhagaystayaasha waxay la kulmi doonaan bandhigga waxayna ku daawan doonaan soosaaraha iyada oo loo marayo shaashadda IMAG oo leh aaladda AR. ”
Qulqulka shaqa-isu-beddelka ayaa muhiim u ahaa go'aannada hal abuurka leh ee hal abuurka iyadoon la diyaarin dhammaystirka AR. Firpo waxay sharraxday, “Waxaan u adeegsanay muuqaalka khariidaynta xayeysiiska ee gx 2 si aad u culus, taas oo noo oggolaatay inaan gebi ahaanba ka joojino dhammaan jagooyinka kaamirooyinka iyo saameynta AR ee masraxa gudaheena gudaheeda. Maareynta ayaa oggolaan karta isbeddelada iyo dib u eegista fog iyadoo la adeegsanayo masraxa marxaladda qalin jabinta muuqaal ahaan u ah waxqabadka dhabta ah.
Isku-darka isdhaafsiga qaabdhismeedka raadraaca kamaradaha 'stYpe camera' wuxuu u oggolaaday AOIN inay ku xirto walxaha kamaradaha tooska ah ee barnaamijka indhaha GUI oo leh muraayadda waqtiga-dhabta ah iyo xogta mowqifka 6D ee qaybta 'stYpe' ay ka heshay kamarad iyo wax soo saar warbaahin ah. Nidaamka 'RedYy' ee 'RedSy' waxaa loo isticmaalay kamarad gacanta lagu haysto, waxaana madaxa Vinten Tracking loo adeegsaday raadinta kamarad fariisaneed goobta FOH camera riser.
"Waxaan ku qasbanahay inaan sameysano khad toosan oo toosan oo aan ka wadno marxaladda dhabta ah, waxaan awoodnay kaliya inaan aragno isugeyntaan iyada oo loo sii marayo kaamirada tooska ah ee loo yaqaan 'XXXX', ayuu yiri Touring AR Injineer Neil Carman. “Markaa isbadalku wuxuu noqday aalad xoog wax ku qori kara waqtiga dhabta ah oo naga caawisay fahamka sixitaanka aan u baahanahay si loo gaaro aragtida iyo mowqifka. Hantida masraxa ee FragmentNine noogu soo bandhigtay mashruuca ayaa si heer sare ah loogu cabbiray boosaska adduunka-dhabta ah. Awoodda lagu hubin karo cabirka ka dhex jira kombuyuutarrada khaldan ayaa ka dhigaysa isu-dheellitirka adduunka dhabta ah iyo dunida meegaanka ah oo aad uga fudud. ”
Mar haddii isku shaandhayn lagu sameeyo dhammaan nidaamyada isku xidhka Stype-ku waxay ku heshiiyeen dhibic guud oo eber ah, taas oo dhammaan sawiradu ka soo bixi karaan, serverku wuxuu u oggolaaday AOIN inay si sax ah ugu wareejiso walxaha shakhsiyadeed ee garaafyada qaybaha kala duwan inta lagu jiro tababarka. Tani waxay ka caawisay AOIN isku xidhka dhaqdhaqaaqa isdhaafsiga ee u dhexeeya jilaayaasha iyo sawirada. "Deganaanshaha qalabka iyo dabacsanaanta software ee kumbuyuutarrada shaashadda ka qeybqaata ayaa si weyn uga qeybqaata guusha safarka dheer," ayaa yiri LIVE-LAB's Chu.
“Xakamaynta muuqaalka la saadaaliyay shaashadda weyn ee LED-ka waxay muhiim u tahay wada noolaanshaha guud ee walxaha, isbadalkuna wuxuu muujinayaa xasiloonida iyo awoodaha hawlgalka ee adag,” ayuu raaciyay Madaxa Hal-abuurka Kevin Kim ee Qorshaha A.
Jackson Gallagher iyo Jeremy Lechterman waxay ahaayeen Soo Saarayaasha Soo Saaraha Soo Saaraha ee ka socda FragmentNine.
Ku saabsan isbadal
madal teknolojiyadda isu beddeli kara hal abuurnimo iyo xirfadlayaal farsamo si loo qiyaaso, la abuuro loona gudbiyo khibrado muuqaal nool oo heer sare ah heerka ugu sareeya.
Iyada oo diiradda la saarayo isku-darka isku-darka wakhtiga-waqtiga dhabta ah ee kumbuyuutarrada ee loo yaqaan '3D' oo ku saleysan waxqabadka sare iyo qalabka adag, waxay awood u siinayaan gudbinta mashaariicda hal abuurka leh ee adag iyo kalsooni.
U rogida fikradaha xaqiiqada, waxay isu beddelayaan xafiisyo London, Hong Kong, New York, Los Angeles iyo Shanghai, oo ay la jiraan kooxo farsamo oo gabi ahaanba taageeraya baahiyaha macaamiisha, iyo sidoo kale iibka lagu duubay dalal ka badan 50.
Iyada oo leh shabakad lammaane caalami ah oo kordhaysa oo kaashaneysa naqshadeeyayaasha aragga adduunka ee ugu hibada badan iyo kooxaha farsamada ee adduunka Tours riwaayadaha farshaxanada, oo ay ku jiraan U2, The Rolling Stones, Beyoncé, Pink! iyo Ed Sheeran, dhacdooyinka nool, oo ay ka mid yihiin Coachella iyo Bandhigga Caalamiga ah ee Moscow, soosaarka tiyaatarka sida Frozen iyo Harry Potter iyo sidoo kale tiro sii kordheysa oo ah filimaanta, telefishannada toos loo daawado, dhacdooyinka shirkadaha iyo madaddaallada - disguise waa dhisida jiilka xiga ee aaladaha iskaashiga si looga caawiyo farshaxan yahanada iyo farsamayaqaannada farsamada inay gaaraan himiladooda.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan soo booqo www.disguise.one
Qoraaladii ugu dambeeyay ee ay soo saartay Hannah Watkins (arki dhan)
qarinaya wada-hawlgalayaasha Kwanda iyo Workfinder si wax looga qabto kala duwanaanta xagga farsamada - February 17, 2021
qarin xR Wadayaasha Alok's Dynamic 'Alive' Muusigga Gaarka ah ee Liveka looga dhex Baahiyo Brazil - January 27, 2021
Indha-sarcaadku wuxuu u kala baxaa filimka Canadian-ka & muuqaalka TV-ga ee soo dhaweynaya Promosa oo ah lammaanihiisii ​​ugu horreeyay ee xR ee waddanka - January 22, 2021
xaqiiqda la kordhiyay garaafyada dhabta ah (AR) sawirada riwaayad isku dhejin dhexgalka Dhacdooyinka nool ee A / V Saxaafadda Saxaafadda Waran & Fallaaro TVU Networks Ultra HD Forum Video Engineer 2019-10-09
Previous: Goldcrest Post iyo La-taliyayaasha CinePointe inay marti-geliyaan aqoon-isweydaarsi ku saabsan Bixinta Filimka
Next: CCTV wuxuu ku guuleystey orodka Drake Boat with Lectrosonics Digital Hybrid Wireless